/ GUDOOMIYAHA BAANKA DHEXE CALI IBRAAHIM OO WAR-SAXAFADEED KA SOO SAARAY HOOS U DHACA SICIR BARARKA GUDOOMIYAHA BAANKA DHEXE CALI IBRAAHIM OO WAR-SAXAFADEED KA SOO SAARAY HOOS U DHACA SICIR BARARKA – Bank of Somaliland
GUDOOMIYAHA BAANKA DHEXE CALI IBRAAHIM OO WAR-SAXAFADEED KA SOO SAARAY HOOS U DHACA SICIR BARARKA
WAR-SAXAFADEED: HOOS U DHACA SICIR BARARKA IYO DIGNIIN KU WAAJAHAN SARRIFLAYAASHA & SHIRKADAHA ISGAADHSIINTA.
Sida uu qeexaayo Xeer Lr 54/2012 Qodobkiisa 4aad waajibaadka asaasiga ah ee Baanka Dhexe waxa ugu muhiimsan dejinta ascaarta iyo ilaalinta qiimaha Shilinka Somaliland. Waxa kale oo uu masuul ka yahay samaynta iyo fulinta siyaasadda lacagta “Monetary Policy”. Haddaba annaga oo waajibaadkaas ka duulayna waxaanu Bulshada Somaliland la wadaagaynaa xogaha rasmiga ah ee soo socda:
Xukuumadda Somaliland oo mamnuucday in wixii ka yar $100 laysugu diro adeegyada Zaadka & Edahab taaso kor u qaadday Isticmaalka, Faafinta, iyo Kaydinta Shilinka Somaliland.Waxa xusid iyo ammaan mudan in adeegyada Zaad & Edahab ay door wayn ka qaateen hirgelinta mashruuca isticmaalka iyo faafinta lacagta qaranka.
Sida ku cad Xeer No. 54/2012, Baanka Dhexe ee Somaliland wuxuu u xilsaaran yahay dejinta ascaarta guud iyo xasilloonida qiimaha SLSH, dalkuna wuxuu galay xaalad cusub oo sicir bararku hoos ugu dhacay 8.4% bishii October 2018. Haddaba, waxaanu dareen-nay dad aan ku xeel dheerayn arrimaha dhaqaalaha oo si khaldan u tarjumay sababaha keenay hoos u dhaca tartiibaysan ee sicir bararka. Waxaanu uga digaynaa Sarriflayaasha iyo Hay’adaha Maaliyadeed ee wareegtadani khusayso inay qabtaan War-saxaafadeedyo ay ku baahinayaan xogo-dhaqaale oo xaqiiqada ka fog bulshadana ku ridaaya jaahwareer.
Waxa kale oo Baanka Dhexe ee Somaliland si dhaw ula socda qaar ka mid ah Shirkadaha Waawayn ee Isgaadhsiinta oo si dadban ugu xadgudbay Go’aankii Xukuumadu ku mamnuucaayay in laysu diro wixii kar $ 100. Waxa iyana jirta Shirkadda Golis oo suuqa sarrifka soo gashay iyadoon Baanka Dhexe ka haysan ruqsad Maaliyadeed “Financial License”. Baanka Dhexe ee Somaliland wuxuu si dhakhso ah u qaadi doonaa tallaabooyin waafaqsan sharciga oo ay ka mid yihiin ruqsad kala noqosho iyo xidhitaanka xafiisyadooda iyo goobaha ganacsigooda.
Cali Ibraahim Jaamac
(Guddoomiyaha Baanka Dhexe ee JSL